साउन ९ देखि सत्याग्रह थाल्ने डा. केसीको चेतावनी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १, २०७४-प्रा.डा.गोविन्द केसीले आफ्नो दुईसूत्रीय माग पूरा नभए साउन ९ अपराहन ४ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका ठोस माग राखेर बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै असार ३१ सम्मको अल्टिमेटम दिएका केसीले उक्त अवधिमा पनि माग पूरा नभएको भन्दै आफू फेरि सत्याग्रह गर्न बाध्य भएको बताए ।
सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्नेसमेत डा. केसीको माग छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. केसीले सबै निजी कलेजमा एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क चालू शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयसरह कायम गर्न माग गरेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क २२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, अधिकार खोस्ने र नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसमेत केसीको छ ।
सांसद संख्या थप्ने कुरा अस्वीकार्य : एमाले ›